အောင်လံမြို့မြို့ မြေတိုးချဲ့စီမံကိန်း၌ သိမ်းဆည်းခံခဲ့ရသော ယာပိုင်ရှင် တောင်သူများနစ်နာ? - Yangon Media Group
အောင်လံမြို့မြို့ မြေတိုးချဲ့စီမံကိန်း၌ သိမ်းဆည်းခံခဲ့ရသော ယာပိုင်ရှင် တောင်သူများနစ်နာ?
လွန်ခဲ့ သောနှစ်ပေါင်း ၂ဝခန့်က မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အောင်လံမြို့ မြို့ မြေတိုးချဲ့ရေးစီမံကိန်းအတွင်း သိမ်းဆည်းခံရသောယာပိုင်ရှင် တောင်သူများ၏နစ်နာမှုများကို စိစစ်ဖော် ထုတ်ပေးသွားမည်ဟု မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး စီမံကိန်းဘဏ္ဍာရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်းက မီဒီယာများသို့ ပြောခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၄ရက် နံနက် ၁ဝ နာရီက အောင်လံမြို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံး၌ ကျင်းပသောသိမ်းဆည်းခံမြေယာများစိစစ်ခြင်းနှင့် စစ် ဆေးတွေ့ရှိချက်များကို ဆွေးနွေး ခြင်းအစည်းအဝေးအပြီးတွင် မီဒီယာများက မေးမြန်းစဉ် ယင်းကဲ့သို့ ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၈ ခုနှစ်က အောင်လံမြို့ မြေတိုးချဲ့ရာမှာ သိမ်းဆည်းခံရတဲ့တောင်သူတွေမှာ လျော် ကြေးလည်းမရ၊ မြေလည်းမရတဲ့ နစ်နာမှုနဲ့ ပြည်စုံတဲ့စီမံကိန်းလည်း ဖြစ်မလာတာတွေကို တောင်သူတွေက တိုင်ကြားလာတဲ့အတွက် လာရောက်စိစစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမြေတွေမှာ လန ၃၉ ရှိ၊ မရှိ ခွင့်ပြုမိန့်တွေနဲ့ မြေပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုကို လုပ် ဆောင်ကာ အကောင်းဆုံးပြေလည် အောင်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့ စိစစ် ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု မကွေးတိုင်းဒေသကြီး စီမံကိန်းဘဏ္ဍာရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေး ဝန်ကြီးဦးဇော်မင်းကပြောကြားသည်။
အောင်လံမြို့ မြို့မြေတိုးချဲ့ ရေးစီမံကိန်းကို ၁၉၉၈ခုနှစ်က စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ရွာထောင်ရပ်ကွက်၊ စက်ရုံရပ်ကွက်နှင့် စမ်း ချောင်းရပ်ကွက်များရှိ ယာမြေများအားသိမ်းဆည်းကာ (ပေ၄ဝx ပေ ၆ဝ) မြေကွက်များ ရိုက်ရောင်းချခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ယာပိုင်ရှင်များက နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ တင်ပြ တောင်းဆိုသဖြင့် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ မြေယာစိစစ်ရေးကော်မတီ မှ မြို့မြေတိုးချဲ့မှုမြေပြင်အခြေ အနေများကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုများ စတင်ပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်။
”အရင်မြို့မြေချထားရေး ကော် မတီရဲ့စာရင်းတွေ ပျောက်ဆုံးနေတာရယ် တောင်သူတွေရဲ့ ယာမြေ တွေကို မြို့မြေတိုးချဲ့ရာမှာ မြေပြင်နဲ့ မြေပုံကွဲလွဲမှုတွေရှိ နေတာကို တွေ့ရှိနေရတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်ကစတင်ပြီး ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်။ နစ်နာဆုံးရှုံးမှု တွေကို မြေသိမ်းမူဝါဒနဲ့ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ အကောင်းဆုံးကုစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု တိုင်းဒေသကြီး လယ်ယာမြေစိစစ် ရေးကော်မတီအဖွဲ့ ဝင်ဦးကျော်ခိုင်လင်းက ပြောကြားသည်။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ၏မြေယာစိစစ်ရေးကော်မတီအသစ်တွင် စည်ပင်သာယာရေး အဖွဲ့ကလည်း အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင် ကြောင်း သိရသည်။
ညောင်ဦးမြို့နယ် အောက်ညဉ့်ကျေးရွာရှိ ရှေးဟောင်း ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအသစ် တည်ဆောက်ရန် အလှ
မန္တလေးမြို့၌ ပထမအကြိမ် ကျင်းပမည့် ရတနာပြပွဲတွင် ကျောက်စိမ်းပန်းပုနှင့် ကျောက်ပန်းချီ ပြို
သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် ဘွဲ့သင်တန်းများသည် ဒေသနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိရန် လိုအပ်ဟုဆို
ထိုင်းနယ်စပ် မြဝတီ အလုပ်သမား ကြိုဆိုရေးလုပ်ငန်းများ မေ ၃၁ ရက်တွင် ရပ်နားပြီ